पोर्न नाटकको आरोप ! ⋆ JINDAGANI.COM
Home » पोर्न नाटकको आरोप !
कार्तिक २०, २०७४	0	By कला अनुरागी
यो नाटकको पछिल्लो मञ्चनको कथा भने ‘मडलेनाज नेपाल’सँग जोडिएको छ । ‘जिआइजेड’मा थिएटर हेर्ने जिम्मा लिएकी जुलिया विगत एक वर्षदेखि मण्डला थिएटरमै छिन् । उनी ‘मडलेनाज’ भन्ने समूहसँग आबद्ध रहिछन् । उनीसँगको सहकार्यको क्रममा नेपालमा पनि रंगमञ्चमा सक्रिय महिलाहरूको समूह बनाउनुपर्छ भन्ने छलफल भयो । त्यसै क्रममा उनकै सक्रियतामा विदेशमा तालिमका लागि पनि साथीहरू जानुभयो ।
नेपालमा पनि कार्यशाला गरियो । सँगै मलडेनाज नेपाल पनि निर्माण भयो । यसको औपचारिक संरचना त छैन, तर सबै रंगमञ्चमा सक्रिय महिलाको ‘सेयरिङ प्लेटफर्म’को रूपमा यसलाई विकास गर्ने कोशिस भइरहेको छ ।
त्यसैले हामीले पछिल्लो चरणमा केटाहरूलाई पनि आउन दियौं । तर उनीहरू आफैं पनि हच्किन्थे । ‘ए !भजाइना ग्रुप पो हो ?’ भन्थे । थिएटरमा दिदी–बहिनी भनिरहेका हुन्छन् केटाहरूले । नाटकमा जोडी बन्नुपर्दा पनि हच्किने सोसाइटीमा त यस्तो कुरा बोल्न सक्ने स्थिति हुँदैनथ्यो ।
(महिला रंगकर्मीहरूको समूह ‘मडलेनाज नेपाल’को अग्रसरतामा एक वर्षअघि ‘भि डे’को सन्दर्भ पारेर मण्डला थिएटरमा तीन दिन अमेरिकी नाटककार इभ एन्सलरको नाटक ‘द भजाइना मोनोलग’को नेपाली संस्करण ‘योनीका कथाहरू’ मञ्चन भयो । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा रातो बंगला स्कुलमा पनि नाटक मञ्चन गरियो । नाटकले परम्परागत निषेधलाई तोड्दै महिला हिंसाको बहस अघि बढाएको चर्चा भइरहेको छ । तर यो नाटक गर्न सजिलो भने थिएन । यो आलेख कलाकार सिर्जना सुब्बाले नाटक गर्दाको चुनौति र अनुभवबारे कला अनुरागीसँग शेयर गरेको अनुभवको आधारमा तयार पारिएको हो ।)
📍 विवाहपहिले नै बच्चाको कल्पना